Col. Bare Hiiraale oo si toos ah ugu biiray Dowlad Goboleedka KGsoomaliya,Loo doorteyna Madaxa Howl galka KGS- state. – idalenews.com
Col.Bare Aadan Shire oo loo yaqaan Bare Hiiraale oo ka mid ah saraakiisha ciidan ee kasoo jeeda gobolka Gedo ee KG ayaa lagu soo waramayaa in uu si toos ah ugu biiray Dowlada Koonfur Galbeed Soomaali uu madaxweyne kayahay Dr.Madoobe Nuunow Maxamed.
Mudane C/laahi Maxamed Idiris oo ah Waziirka Wazaarada Gaadiidka, Isgaarsiinta iyo Garoomada ee Dowlada Koonfur Galbeed Soomaaliya oo la hadlay warbaahinta dalka ayaa xaqiijiyay in Col.Bare Hiiraale uu si toos ah u hoos imaandoono Dowladooda taasoo maamusha lixda ee gobol ee KGS.
Waziirka ayaa intaas ku daray Col.bare Hiiraale loo doortay madaxa howlgalada ciidamada KG gobolada Jubooyinka ayaa lagu wadaa in dhawaan ciidamada ku sugan Gobweyn uu utago Madaxweyne ku xigeenka KG Mudane Maxamuud Sayid Aadan kaasoo ciidanka uqaban doona munaasabad lagu dhaarinaayo ciidamadaaasi.
Isku soo waduuboo hadalka Waziirka ayaa kusoo beegmaya xili maalin nimadii shalay Bare Hiire uu la hadlay VOA kaasoo gebi ahaanba qaadacay qorsho beeleedka uu waday R/W C/weli Sheikh.
Isbaarooyin Hor leh oo lasoo dhigay Gobolka Shabeelaha Hoose & Maamulka gobolkaasi oo ka hadlay.